Otu Chineke na otu Onyenwe anyị - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Otu Chineke na otu Onyenwe anyị
Otu Chineke, Nna, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst
Ọ dịghị Chineke ma ọ bụghị otu - otu Chineke Nna
Chineke bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs
Otu Chineke dị bụ Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịịrị maka ya
Chineke mere Jizọs ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst
Jizọs bụ onye na -ejere Chineke ozi
E nwere otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ihe niile si n'aka ya bịa na onye anyị sitere n'aka ya
Gịnị banyere Abụ Ọma nke 110? Ọ bụ na e nweghị Onyenwe anyị abụọ?
Nkwupụta doro anya na-akọwapụta na ịmata otu Chineke, Nna na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst bụ 1 Ndị Kọrịnt 8: 4-6. N'ebe a Pọl na -ekwu, “ọ dịghị Chineke ọ bụla dị ma e wezụga otu” na mgbe ọ na -akọwa onye bụ Chineke, ọ bụ ya bụ Nna, onye bụ isi mmalite nke ihe niile na onye anyị bụ maka ya. Pọl gara n'ihu na -ekweta n'amaokwu a na e nwere ọtụtụ “chi” na ọtụtụ “ndị nwenụ”, mana, n'echiche siri ike, ọ dị otu anyị kwesịrị ịtụle Chineke yana onye anyị kwesịrị iwere dị ka Onyenwe anyị. Chineke mere Jizọs ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst (Ọlụ Ndịozi 2:36). N'ọdịdị “chi” ọ bụ naanị Chukwu Nna. N'ime udi nke “ndị nwenụ” ọ bụ otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst (Jizọs Onyenwe anyị Mesaịa). Otu Chineke na Nna bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst (1 Pita 1: 3, 2 Ndị Kọrịnt 1: 2-3).
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ bụ ESV (English Standard Version)
Ọrụ Ndịozi 2:36, Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a
1 Pita 1: 3 Ngọzi dịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst
3 Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist! Dịka nnukwu ebere ya siri dị, o meela ka a mụọ anyị ọzọ na olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ
2 Amara na udo si n'aka Chineke bụ Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst. 3 Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi niile
Nghọta bụ isi nke ịbụ otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị bụ maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere na ya (1 Cor 8: 5-6) dabara zuru oke na maapụ Akwụkwọ Nsọ nke ihe ọ pụtara n'okpuru. Otu Chineke na Nna bụ isi iyi nke ihe niile, anyị dịkwa adị (bụ ihe okike ọhụrụ) site na Kraịst.
Akwụkwọ Nsọ, gụnyere Shema ndị Juu, nkwenye nke ịdị n'otu nke Chineke na -egosi na ọ dịghị Chineke ma e wezụga otu (Nna).
"... ọ dighi Chineke ọ bu ma -ọbughi otù. " 5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe nile sitere n'aka ya na onye anyị bụ maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya.
Deuterọnọmi 6: 4-5, Jehova (YHWH) Chineke gị, Jehova (YHWH) bụ otu
4 “Nụrụ, Izrel: Jehova Chineke anyị, Jehova bụ otu. 5 Ị ga -ahụ Jehova bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na ike gị niile.
Mark 12: 29-30, Jehova (YHWH) Chineke gị, Jehova (YHWH) bụ otu
29 Jizọs zara, "Nke kachasị mkpa bụ, 'Nụrụ, Izrel: Jehova bụ Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. 30 Ị ga -ahụkwa Onyenwe anyị Chineke gị n'anya site n'obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na uche gị niile na ike gị niile. '
John 17: 1-3, "Nna ... naanị gị bụ ezi Chineke"
1 Mb Jesuse Jisus kwusiri okwu ndia, O welie anya -Ya le elu -igwe, si, “Nna, oge awa ahụ eruwo; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, 2 ebe I nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, inye ndị niile I nyere ya ndụ ebighi ebi. 3 Ma nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, na Jisus Kraịst onye I zitere.
Ndị Efesọs 4: 6, otu Chineke na Nna nke ihe niile, onye bụ onye na -elekọta ihe niile na ihe niile na ihe niile
6 otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, onye na -ahụ maka ihe niile na ihe niile na ihe niile.
Amaokwu ndị a na -egosi ọdịiche dị n'etiti otu Chineke, Nna, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst. Jizọs kpọrọ Chineke dị ka Chineke ya na Nna ya dị ka Nna ya. Chineke bụ Chineke na Nna Jizọs.
John 8:54, “ọ bụ Nna m na -enye m otuto”
John 10: 17, "Nke a bụ ihe mere Nna m ji hụ m n'anya"
17 N'ihi nke a Nna nāhum n'anya, n'ihi na Mu onwem nātọb lifeọ ndum ka m weghachi ya ọzọ.
John 10:29, "Nna m ka ihe niile"
Jọn 14:28Nna ka m ukwuu"
28 Ị nụrụ ka m gwara gị, 'Ana m ala, m ga -abịakwutekwa gị.' Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị gaara aicedụrị ọ ,ụ, n'ihi na M na -alakwuru Nna m, n'ihi na Nna m ka m ukwuu.
1 Mb Jesuse Jisus kwusiri okwu ndia, O welie anya -Ya le elu -igwe, si, “Nna, oge awa ahụ eruwo; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, 2 ebe I nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, inye ndị niile I nyere ya ndụ ebighi ebi. 3 Ma nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Onye I zitere, bú Jisus Kraist.
John 20: 17, "Ana m arịgokwuru Chineke m na Chineke gị"
17 Jesus ọdọhọ enye ete: “K notyịre mi ke idem, koro Enwetabeghị m gakwuru Nna; ma gakwuru ụmụnne m sị ha, 'Ana m arịgokwuru Nna m na Nna gị, na Chineke m na Chineke gị'"
3 Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist! Dịka oke ebere ya siri dị, o meela ka a mụọ anyị ọzọ na olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ
Akwụkwọ Nsọ na -ekwusi ike na ọ dịghị Chineke ọ bụla ma e wezụga otu na na otu Chineke a bụ Nna onye ihe niile sitere na ya.
(1 Ndị Kọrịnt 8: 4-6) Otu Chineke dị bụ Nna na otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
"... ọ dịghị Chineke ọ bụla ma ọ bụghị otu." 5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye onye obula sitere ihe na onye anyị dị, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile si n'aka ya bịa na onye anyị sitere n'aka ya.
Ilu 3:19 (LSV), YHWH jiri amamihe tọọ ntọala ụwa
YHWH jiri amamihe tọọ ntọala ụwa, || O ji nghọta dozie eluigwe.
AB 33 ỌMA 6: XNUMX (IGBOB), Site n'okwu YHWH na ume nke ọnu -Ya
Site na okwu YHWH || Emewo eluigwe, || Na ndị ọbịa ha niile n'akụkụ ume nke ọnụ Ya.
Abụ Ọma 110: 30-33 (LSV), Chineke na-eke ihe site na mmụọ ya, YHWH na-aicesụrị ọ inụ n'ọrụ ya
ị zipụ mmụọ gị, e kere ha, || Ị na -emekwa ka ihu ala dị ọhụrụ. Ebube YHWH diri mb timee nile, || YHWH na -aicesụrị ọ inụ n'ọrụ ya, Onye na -ele ụwa anya, ọ na -amakwa jijiji, || Ọ na -abịakwute ugwu nta, ha na -a smokeụ sịga. M na -abụku YHWH abụ n'oge ndụ m, || Ana m abụ abụ otuto nye Chineke m mgbe m dị ndụ.
Luke 1: 30-35 (ESV), Jizọs bụkwa onye Chineke kere
30 Mọ-ozi ahu we si ya, Atula egwu, Meri, n'ihi na Chineke mere gi amara. 31 Ma le, ị ga -atụrụ ime n'akpa nwa gị ma mụọ nwa nwoke, ị ga -akpọkwa aha ya Jizọs. 32 Ọ ga -adị ukwuu, a ga -akpọkwa ya Nwa nke Onye Kasị Elu. Na Onye -nwe -ayi Chineke ga -enye ya oche -eze nna -ya Devid, 33 Ọ ga-achịkwa ụlọ Jekọb ruo mgbe ebighị ebi, alaeze ya agaghịkwa enwe ọgwụgwụ. ” 34 Meri we si mọ-ozi ahu, Ìhe a g besi a ,a me, ebe mu onwem bu nwa-ab virginọghọ nāmaghi nwoke? 35 Mọ -ozi ahu we za ya, si,Mmụọ Nsọ ga -abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga -ekpuchikwa gị; ya mere nwa a ga -amụ ga -akpọ onye dị nsọ — Ọkpara nke Chineke.
Jọn 1: 1-4, 14 (Geneva 1599), ihe niile (gụnyere Kraịst) bụ ihe sitere na Okwu Chineke (Logos)
1 Na mbu ka Okwu ahu diri, okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke. 2 onye ahu na Chineke diri na mbu. 3 Ekère ihe nile site n'aka -ya; ekèghi kwa otù ihe ọ bula nke ekèworo ma Ọ nọghi ya. 4 N'ime ya bụ ndụ na ndụ bụ ìhè mmadụ ... 14 Okwu ahụ wee bụrụ anụ arụ ma biri n'etiti anyị (anyị hụkwara ebube ya, dị ka ebube nke naanị otu a mụrụ ya nke Nna) juputara n'amara na ezi -okwu.
Enwere ike ịghọta okwu (Logos) dị ka okwu-amamihe nke Chineke gbasara amamihe, nghọta, echiche, echiche, ebumnuche atụmatụ, mgbagha, ebumnuche, wdg.
Ọtụtụ ntụgharị asụsụ Bekee na-ele mmadụ anya n'ihu iji duhie onye na-agụ ya ka o wee chee na Okwu ahụ bụ Kraịst tupu ọ banye n'anụ ahụ. Geneva bụ ntụgharị asụsụ ka mma mana enwerekwa ụfọdụ nsogbu.
Okwu a na -eme anụ ahụ = Chineke na -ekwu na Jizọs dị adị dịka amamihe ya si dị
Iji nweta nghọta ka mma na Okwu mmalite nke Jọn hụ https://understandinglogos.com - Ghọta ezi ihe akara ngosi dị na okwu mmalite nke Jọn.
Ọlụ Ndị Ozi 3:26 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Chineke kpọlitere ohu ya n'ọnwụ
Ndị Galetia 4: 4-5 (NIV), Chineke zitere Ọkpara ya, nwanyị mụrụ ya
4 Ma mgbe oge zuru oke ruru, Chineke zitere Ọkpara ya, nke nwanyị mụrụ, amụrụ n'okpuru iwu, 5 iji gbapụta ndị nọ n’okpuru iwu, ka anyị wee nata nnabata dị ka ụmụ.
Ndị Rom 5: 14-21 (ESV), Jizọs bụ ụdị nke Adam (ihe okike nke Chineke)
14 Ma ọnwụ chịrị site na Adam ruo Moses, ọbụlagodi ndị mmehie ha na -adịghị ka njehie nke Adam, onye bụ ụdị nke onye ahụ gaje ịbịa.
1 Ndị Kọrịnt 15:45 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Jizọs bụ Adam ikpeazụ (ihe okike Chineke kpọmkwem)
45 Otua ka edeworo ya n'akwukwọ, “nwoke mbu Adam ghọrọ ihe dị ndụ”; Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ.
Otu n'ime isi ihe ndịozi kwusara na Ọrụ Ndịozi bụ na Chineke mere Jizọs Onyenwe anyị na Kraịst (Ọrụ 2:36). Nke a na-ekwu maka mbilite n'ọnwụ (Ọrụ 2: 24-32) na ibuli elu n'aka nri Chineke (Ọlụ Ndịozi 2: 33-35). Nke a bụ ihe ndị ozi kuziri n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi niile, egosiri ya nke ọma na Ndị Filipaị 2: 8-11, Ndị Efesọs 1: 17-23, na na Mkpughe 12:10 na Mkpughe 20: 6. Ugbu a, a na -ewere Jizọs dị ka Onyenwe anyị Mesaya (Onye E Tere Mmanụ) site n'ike na ikike Chineke nyere ya.
Ọlụ Ndị Ozi 4:26, megide Onyenwe anyị na imegide Onye Etere Ya (Kraist)
Ọrụ 5: 30-31, Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta
30 Chineke nke nna nna anyị ha kpọlitere Jizọs n'ọnwụ, onye unu gburu n'osisi n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie. "
Ọrụ 17: 30-31, Chineke ga-ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara
Ndị Efesọs 1: 17-23, Chineke mere ka ọ nọdụ ala n'aka nri ya n'ebe ndị dị n'eluigwe
17 na Chineke nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist, Nna nke ebube, nwere ike nye gị Mmụọ amamihe na nke mkpughe n'ịmara ya, 18 ebe enwetara anya nke obi unu, ka unu wee mara ihe bụ olile anya nke ọ kpọrọ unu, gịnị bụ akụ nke ihe nketa ya dị ebube n'ime ndị nsọ, 19 na ihe bụ ịdị ukwuu na -enweghị atụ nke ike ya n'ebe anyị bụ ndị kwere, dị ka ịrụ ọrụ nke nnukwu ike ya siri dị 20 na ọ rụrụ ọrụ n'ime Kraịst mgbe O mere ka O si na ndị nwụrụ anwụ bilie wee nọdụ ala n'aka nri ya n'ebe ndị dị n'eluigwe, 21 dị elu karịa ọchịchị niile na ikike na ike na ọchịchị, na karịa aha niile a kpọrọ aha, ọ bụghị naanị n'oge a kamakwa na nke na -abịa.. 22 O debere ihe niile n'okpuru ụkwụ ya wee nye ya onye isi ihe niile na nzukọ, 23 nke bụ ahụ ya, njupụta nke onye ahụ na -emeju ihe niile n'ime ihe niile.
N'ime Agba Ọhụrụ, Jizọs na -akọwa onwe ya dịka ndị ọzọ kọwara ya dị ka onye nnọchi anya Chineke.
Matiu 12:18, Lee nwa odibo m nke m họpụtara
Luke 4: 16-21, "Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o teela m mmanụ"
O wee bịa Nazaret, ebe ọ nọ too. Dịkwa ka ọ na -eme, ọ gara n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị izu ike wee bilie gụọ akwụkwọ. 17 Ewe nye ya akwukwọ Aisaia onye -amuma. O meghere akwụkwọ mpịakọta ahụ wee chọta ebe e dere ya, 18 "Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ka m kwusaara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka m wee tọhapụ ndị a na -emegbu emegbu., 19 ịkpọsa arọ amara Jehova. " 20 O wee mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ nyeghachi onye na -ejere ya ozi wee nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee legide ya anya. 21 O wee malite ịsị ha,Taa emezuwo Akwụkwọ Nsọ a na ntị gị. "
Jọn 8:40, “mụ, nwoke nke gwara unu eziokwu nke m nụrụ n'ọnụ Chineke”
John 15: 10, edebewo m ihe Nna m nyere n'iwu wee nọrọ n'ịhụnanya ya
Ọlụ Ndị Ozi 2: 22-24, E nyefere mmadụ dịka atụmatụ na ịmara nke Chineke si dị
Ọrụ 3:26, Chineke kpọlitere ohu ya
Ọrụ 4: 24-30, ekpere ndị kwere ekwe
24 … Ha weliri olu ha ọnụ wee gwa Chineke wee sị, “Ọkaakaa Onyenwe anyị, onye kere eluigwe na ụwa na oke osimiri na ihe niile dị n'ime ha, 25 Onye sitere n'ọnụ nna gị Devid, ohu gị, kwuru site na Mmụọ Nsọ, sị, 'Gịnị mere ndị mba ọzọ ji wee iwe, ndị mmadụ wee na -akpa nkata n'efu? 26 Ndi -eze nke uwa guzoro onwe -ha, Ndi -isi zukọ -kwa -ra, megide Onye -nwe na imegide Onye E Tere Mmanụ ya' - 27 n’ihi na n’ezie n’obodo a, ndị mmadụ zukọrọ megide ohu gị dị nsọ Jizọs, onye i tere mmanụ, ma Herọd na Pọntiọs Paịlet, tinyere ndị mba ọzọ na ndị Izrel., 28 ime ihe ọ bụla aka gị na atụmatụ gị kpebirila ime. 29 Ma ub͕u a, Onye-nwe-ayi, lekwasi okwu-ugha-ha anya, nye kwa ndi-orù-Gi iwu, 30 ka ị na -esetị aka gị ịgwọ ọrịa, a na -eme ihe ịrịba ama na ihe ebube aha ohu gị dị nsọ Jizọs. "
Ọrụ 10: 37-43, Ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe
37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 otú Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu. n'ihi na Chineke nọnyeere ya. 39 Anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe niile o mere ma n'obodo ndị Juu ma na Jerusalem. Ha gburu ya n'osisi n'elu osisi, 40 ma Chineke kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ me kwa ka ọ puta ìhè, 41 ọ bughi madu nile, kama ọ bu ayi, ndi Chineke rọputara ibu ndi -àmà, ndi soro Ya rie ihe du kwa mb aftere O siri na ndi nwuru anwu bilie. 42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. ”
Akụkụ ikpeazụ nke 1 Ndị Kọrịnt 8: 6 na -ekwu na enwere “otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya.” A na -enye ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na ESV iji gbaa ama n'echiche nke anyị dị site na Kraịst. Chineke ji amamihe nke Kraist onye gaje ịbịa kee ụwa a (Ndị Efesọs 3: 9-11). Anyị dị ndụ site na Kraịst n'echiche bụ na o nyere onwe ya maka mmehie anyị iji napụta anyị n'oge ọjọọ a (Gal 1: 3-4). Amamihe nke Chineke bụ Kraịst n'obe (1 Ndị Kọrịnt 1: 21-25). Anyị na -azọpụta anyị site na oke iwe nke Chineke. Amamihe dị iche iche nke Chineke bụ ebumnuche ebighi ebi nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị (Ndị Efesọs 3: 9-11).
"... ọ dịghị Chineke ọ bụla ma ọ bụghị otu." 5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma nye anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye e sitere n'aka ya kee ihe niile na onye anyị sitere n'aka ya.
Amaokwu nke 6 na -enye nkọwa na otu Chineke na Nna bụ onye okike (isi mmalite) na otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ mkpali maka okike na onye nnọchi anya nzọpụta (onye onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya). Amaokwu ndị a na -agba akaebe n'echiche bụ na e nwere otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya.
Luk 1: 30-33, Ọ ga-achị ụlọ Jekọb ruo mgbe ebighị ebi, alaeze ya enweghịkwa ọgwụgwụ
30 Mọ-ozi ahu we si ya, Atula egwu, Meri, n'ihi na Chineke mere gi amara. 31 Ma, le, i gāturu ime, mua nwa -nwoke, i gākpọ kwa aha -ya Jesus. 32 Ọ ga -adị ukwuu, a ga -akpọkwa ya Ọkpara nke Onye Kasị Elu. Jehova, bú Chineke, g willnye kwa ya oche -eze Devid nna -ya, 33 ọ gābu kwa eze ulo Jekob rue mb forevere ebighi -ebi, ala -eze -ya agaghi -agwu kwa agwu."
Luk 22: 19-20, Ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ hiwere n'ọbara ya
Luk 24: 44-48, ekwesịrị ịkpọsa nchegharị maka mgbaghara mmehie na mba niile n'aha ya
44 Mgbe ahụ ọ sịrị ha, “Ndị a bụ okwu m nke m gwara unu mgbe mụ na unu nọ, na ihe ọ bụla edere gbasara m n'iwu Moses na ndị amụma na abụ ọma ga -emezurịrị." 45 Mgbe ahụ o meghere uche ha iji ghọta Akwụkwọ Nsọ, 46 o we si ha, Otú a ka edeworo ya n'akwukwọ nsọ, na Kraist -ayi gāhu ahuhu, si kwa na ndi nwuru anwu bilie n'ubọchi nke -atọ; 47 na nke ahụ ekwesịrị ịkpọsa nchegharị maka mgbaghara nke mmehie na mba niile n'aha ya, malite na Jeruselem.
Ọrụ 3: 17-21, Jizọs bụ Kraịst ahụ a họpụtara nye gị
17 Ma ub͕u a, umu-nnam, amataram na unu mere ihe n'amaghi-ama, dika ndi-isi-unu. 18 Ma ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraist ya ga-ata ahụhụ, o mezuru. 19 Ya mere chegharia, chigharia, ka ewe b͕apu nmehie-unu, 20 ka oge inye ume wee si n'ihu Onye -nwe bịa, na ka o wee ziga Kraịst họpụtara gị, Jizọs, 21 onye eluigwe ga -anabata rue oge iweghachi ihe niile nke Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga.
Ọlụ Ndị Ozi 4: 1-2, n'ime Jizọs, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ
1 Ma mb͕e ha nāgwa ndi-Ju okwu, ndi-nchu-àjà na onye-isi ulo uku Chineke na ndi-Sadusi biakutere ha, 2 ezigbo iwe n'ihi na they nọ na -akụziri ndị mmadụ na na -ekwusa na Jizọs mbilite n'ọnwụ.
Ọlụ Ndị Ozi 4: 11-12, Ọ dịghị aha ọzọ dị n'okpuru eluigwe nke enyere n'ime mmadụ nke a ga-eji zọpụta anyị
11 Jizọs a bụ nkume nke gị, ndị na-ewu ụlọ, jụrụ, nke ghọworo isi nkuku. 12 Nzọpụta adịghịkwa n'onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ n'okpuru eluigwe nke enyere n'etiti mmadụ nke a ga -eji zọpụta anyị. "
Ọrụ 10: 42-43, Ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ
42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. "
30 Oge amaghị ihe Chineke lefuru anya, mana ugbu a ọ na -enye iwu ka mmadụ niile nọ ebe niile chegharịa, 31 n'ihi na O wepụtala otu ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ”
Jọn 3: 14-17, ka onye ọbụla kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi
14 Dika Moses weliri agwọ n'ọhia, ọbuná otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu, 15 ka onye ọbụla kwere na ya wee nwee ndụ ebighi -ebi.16 “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na ọ nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi -ebi. 17 N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara Ya n'ụwa ka O kpee ụwa ikpe. kama ka ewe site n'aka -Ya zọputa uwa.
John 3: 35-36, Nna enyefeela ihe niile n'aka ya
John 5: 21-29, Chineke enyela ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ
21 N'ihi na dị ka Nna m na -akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ ma na -enye ha ndụ, otu ahụ ka Ọkpara na -enyekwa onye ọ chọrọ. 22 N'ihi na Nna anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe. kama O nyewo Ọkpara ikpé nile, 23 ka mmadụ niile wee sọpụrụ Ọkpara, dịka ha na -asọpụrụ Nna. Onye na -adịghị asọpụrụ Ọkpara anaghị asọpụrụ Nna ya nke zitere ya. 24 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, Onye ọ bụla nke na -anụ okwu m wee kwere n'onye zitere m nwere ndụ ebighị ebi. Ọ baghị na ikpe, kama ọ gafere ọnwụ ruo na ndụ. 25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a. mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. 28 Ka ihe a ghara iju unu anya, n'ihi na oge awa na -abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga -anụ olu ya 29 puta -kwa -ra, ndi mere ezi ihe rue nbilite -n'ọnwu nke ndu, ndi mere ajọ ihe gābilite na nbilite -n'ọnwu nke ikpé.
John 6: 35-38, "Abụ m achịcha nke ndụ"
35 Jizọs sịrị ha, “Abụ m achịcha nke ndụ; onye ọ bula nke nābiakutem, agu agaghi -agu ya: onye ọ bula nke kwere na Mu, akpiri agaghi -akpọ ya nku ma -ọli. 36 Ma asim unu, na unu ahuwom, ma unu ekweghi. 37 Ihe niile Nna na -enye m ga -abịakwute m, onye ọ bụla bịakwutere m agaghị m achụpụ ya.
John 14: 6, “Ọ dịghị onye na -abịakwute Nna ma ọ bụghị site na mụ”
6 Jizọs sịrị ya:Abụ m ụzọ, na eziokwu, na ndụ. Ọ dịghị onye na -abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.
John 15: 1-6, "Abụ m ezi osisi vaịn, nna m bụkwa onye na-elekọta ubi vaịn"
1 “Abụ m ezi osisi vaịn, Nna m bụkwa onye ọrụ ubi vaịn. 2 Alaka ọ bụla n'ime m nke na -adịghị amị mkpụrụ ọ na -ewepụ, alaka ọ bụla na -amị mkpụrụ ọ na -akwacha, ka o wee mịa ọtụtụ mkpụrụ. 3 Ị dị ọcha ugbu a n'ihi okwu m gwara gị. 4 Nọgidenụ n'ime m, mụ onwe m n'ime unu. Dị ka alaka enweghị ike ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ọ gwụla ma ọ na -ebi n'ime osisi vaịn, gị onwe gị enweghị ike, ọ gwụla ma ị na -ebi n'ime m. 5 Abụ m osisi vaịn ahụ; unu bụ ẹka. Onye ọ bụla na -anọgide n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya, ọ bụ ya na -amị mkpụrụ dị ukwuu; 6 Ọ bụrụ na onye ọ bụla anọgideghị n'ime m, a na -atụpụ ya dị ka alaka wee kpọnwụọ; a na -achịkọtakwa alaka ya, tụba ya n'ime ọkụ wee kpọọ ya ọkụ.
Jọn 17: 1-3 I nyere ya ikike n'ahụ anụ ahụ niile, inye ndị niile i nyere ya ndụ ebighi ebi
1 Mgbe Jizọs kwuchara okwu ndị a, o welie anya ya lee eluigwe, sị, “Nna, oge awa ahụ eruola; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, 2 ebe ọ bụ na i nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, ka ọ nye ndị niile i nyere ya ndụ ebighi ebi. 3 Ma nke a bụ ndụ ebighi ebi, ka ha mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere Jizọs Kraịst. ”
Ndị Galetia 1: 3-5, Jizọs nyere onwe ya maka mmehie anyị iji napụta anyị n'ajọ oge a
3 Amara na udo si n'aka Chineke bụ Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, 4 Onye nyere onwe ya maka mmehie anyị iji napụta anyị n'ajọ ajọ oge a, dị ka uche nke Chineke na Nna anyị si dị, 5 otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
1 Ndị Kọrịnt 1: 21-25, Amamihe Chineke bụ Kraịst a kpọgidere n'obe
21 N'ihi na, n'amamihe Chineke, ụwa ejighị amamihe mara Chineke, ọ masịrị Chineke site na nzuzu nke ihe anyị na -ekwusa ịzọpụta ndị kwere. 22 N'ihi na ndị Juu na -achọ ihe ịrịba ama na ndị Grik na -achọ amamihe, 23 ma anyị na -ekwusa Kraịst akpọgidere n'obe, ihe ịsụ ngọngọ nye ndị Juu na nzuzu nye ndị mba ọzọ, 24 ma nye ndị akpọrọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kraịst bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chineke. 25 N'ihi na nzuzu nke Chineke mara ihe karịa mmadụ, adịghị ike nke Chineke dịkwa ike karịa mmadụ.
1 Ndị Kọrịnt 15: 20-25, Dịka mmadụ niile na-anwụ n'ime Adam, otu a kwa ka a ga-eme ka mmadụ niile dị ndụ n'ime Kraịst.
20 Ma n'ezie, emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. 21 N'ihi na dika ọnwu sitere n'aka madu, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye. 22 N'ihi na dịka mmadụ niile na -anwụ n'ime Adam, otu a ka ọ dịkwa nime Kraist ka aga eme ka madu nile di ndu. 23 Ma onye ọ bụla n'usoro nke ya: Kraịst mkpụrụ mbụ, emesịa n'ọbịbịa ya ndị nke Kraịst. 24 Mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga -abịa, mgbe ọ ga -enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke Nna mgbe o bibisịrị ọchịchị niile na ikike niile na ike niile. 25 N'ihi na ọ ghaghi ibu eze rue mb hee Ọ g putdebewori ndi-iro-ya nile n'okpuru ukwu-ya.
2 Ndị Kọrịnt 5:10, Anyị niile ga -apụta n'ihu oche ikpe Kraịst
10 n'ihi na anyị niile ga -apụta n'ihu oche ikpe nke Kraịst, ka onye ọ bụla wee nata ihe kwesịrị maka ihe o mere n'ahụ, ma ọ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ.
2 Ndị Kọrịnt 5: 17-19, Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ onye e kere ọhụrụ
17 Ya mere, ọ buru na onye ọ bula di nime Kraist, ọ bu onye ekère ọhu. Ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abiala. 18 Ihe a niile sitere na Chineke, onye sitere na Kraịst mee ka anyị na ya dị n'otu wee nye anyị ozi nke ime ka a dị ná mma; 19 ya bụ, nime Kraist Chineke na -eme ka ya na ụwa dị n'otu, n'agụghị njehie ha megide ha, ma nyefee anyị ozi nke ime ka a dị ná mma.
Ndị Rom 5: 8-10, Kraịst zọpụtara anyị n'iwe nke Chineke, mere ka anyị na ya dị ná mma site n'ọnwụ Ọkpara ya
8 ma Chineke na -egosi ịhụnanya ya nʼihi na Kraịst nwụrụ maka anyị mgbe anyị ka bụ ndị mmehie. 9 Ebe, yabụ, ugbu a emela ka anyị bụrụ ndị ezi omume site n'ọbara ya, karịa àyi gāzoputa ayi site n'iwe Chineke?. 10 N'ihi na asi na mb wee ayi bu ndi -iro anyị na Chineke dị n’udo site n’ọnwụ Ọkpara ya, ọtụtụ ihe, ugbu a anyị na -adị ná mma, àg weji ndu -ya zọputa ayi.
Ndị Rom 6: 3-11, Dịka emere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, anyị onwe anyị kwa nwere ike na-ejegharị na ndụ ọhụrụ
3 Ị maghị nke ahụ anyị niile ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs bụ ndị e mere baptizim baa n'ọnwụ ya? 4 Ya mere, e liri anyị na ya site na baptism n'ime ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e si n'ọnwụ kpọlite ​​Kraịst site n'ebube nke Nna, anyị onwe anyị nwekwara ike na -ejegharị na ndụ ọhụrụ. 5 N'ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị na ya n'ọnwụ dịka ya, we ga -ejikọkwa ya na mbilite n'ọnwụ dịka nke ya. 6 Ayi mara na akpọgidekọrọ Ya na madu ochie ayi n'obe, ka ewe me ka aru nke nmehie we ghara idi irè, ka ayi we ghara ibu orù nke nmehie ọzọ. 7 N'ihi na onye nwụworo anwụ nwere onwe ya na mmehie. 8 Ma ọ bụrụ na anyị na Kraịst nwụrụ, anyị kwenyere na anyị na ya ga -adịkọkwa ndụ. 9 Anyị maara na ebe emere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, ọ gaghị anwụ ọzọ; ọnwụ enweghịzi ike n'ahụ ya. 10 Maka ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ maka mmehie, naanị otu ugboro, mana ndụ ọ na -adị, ọ na -adịrị Chineke. 11 Ya mere unu onwe -unu g considersikwa na unu bu ndi nwuru n'ebe nmehie di, na unu nādi ndu nime Chineke nime Kraist Jisus.
Ndị Filipaị 2: 8-11, Chineke buliri ya elu nke ukwuu wee nye ya aha karịa aha niile
8 Ebe achọputara ya na udi nke madu, o wedara onwe ya ala site na nrube isi rue onwu, obuna onwu n’elu obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ọ bụrụ n'aha Jizọs ka ikpere ọbụla gbuo ikpere n'ala, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, iji nye Chineke Nna Nna otuto.
Ndị Efesọs 1: 17-23, Ọ debere ihe niile n'okpuru ụkwụ ya
17 na Chineke nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist, bú Nna nke ebube, nwere ike nye gị Mmụọ amamihe na nke mkpughe n'ịmara ya, 18 ebe enwetara anya nke obi unu, ka unu wee mara ihe bụ olile anya nke ọ kpọrọ unu, gini bu àkù nke ihe -nketa -ebube -ya n'etiti ndi nsọ, 19 na ihe bụ ịdị ukwuu na -enweghị atụ nke ike ya n'ebe anyị bụ ndị kwere, dị ka ịrụ ọrụ nke nnukwu ike ya siri dị 20 na ọ rụrụ ọrụ n'ime Kraịst mgbe ọ kpọlitere ya n'ọnwụ ma mee ka ọ nọdụ ala n'aka nri ya n'ebe ndị dị n'eluigwe, 21 dị elu karịa ọchịchị niile na ikike na ike na ọchịchị, na karịa aha niile a kpọrọ aha, ọ bụghị naanị n'oge a kamakwa na nke na -abịa.. 22 O wee debe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya ma nye ya onye isi ihe niile nye nzukọ -nsọ, 23 nke bụ ahụ ya, njupụta nke onye ahụ na -emeju ihe niile n'ime ihe niile.
Ndị Efesọs 3: 9-11, Amamihe dị ukwuu nke Chineke bụ nzube ebighi ebi nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị
9 na ikpughe nye onye ọ bụla ihe bụ plan nke ihe omimi zoro ezo kemgbe Chineke, Onye kere ihe niile, 10 nke mere na site na ụka amamihe dị iche iche nke Chineke enwere ike ime ka ndị na -achị achị na ndị isi nọ n'eluigwe mara ugbu a. 11 Nke a bụ dịka ebumnuche ebighi ebi nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị,
Ndị Kọlọsi 1: 12-14, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, mgbaghara mmehie.
12 na -ekele Nna, onye mere ka ị ruo oke ịkekọrịta ihe nketa nke ndị nsọ n'ìhè. 13 Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, 14 Onye anyị nwere mgbapụta n'ime Ya, bụ mgbaghara mmehie.
Ndị Kọlọsi 1: 18-23, site na ya ka e mee ka ihe niile dị n'otu-na-eme udo site n'ọbara nke obe ya
8 na ọ bụ ya bụ isi ahụ, ọgbakọ. Ọ bụ mmalite, onye eburu ụzọ si na ndị nwụrụ anwụ pụta, ka o wee bụrụ onye kachasị elu n'ihe niile. 19 N'ihi na nime Ya ka izu -oke nile nke Chineke tọrọ ụtọ ibi nime Ya, 20 na site n'aka ya ka ya na ihe niile dịghachi ná mma, ma n'elu ụwa ma ọ bụ n'eluigwe, na -eme udo site n'ọbara nke obe ya. 21 Unu onwe -unu kwa, ndi buru ndi -ọbìa na ndi -iro n'obi, n doingme ihe ọjọ, 22 ugbu a, o meela ka ya na anụ ahụ ya dị ná mma site n'ọnwụ ya, ka o wee chee unu n'ihu unu dị nsọ, bụrụkwa onye a na -apụghị ịta ụta na n'ihu ịta ụta n'ihu ya., 23 ọ bụrụ n'ezie na ị na -anọgide n'okwukwe, na -akwụsi ike ma na -akwụsi ike, na -ahapụghị olileanya nke ozi ọma ahụ nke ị nụrụ, nke ekwusara na ihe niile e kere eke n'okpuru eluigwe, nke mụ, Paul, ghọrọ onye ozi.
1 Timoti 2: 5-6, Otu Chineke dị, na otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
5 n'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, 6 onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ akaebe a na -enye n'oge ya.
Ndị Hibru 1: 1-4, N'ịbụ onye dị elu karịa ndị mmụọ ozi
1 Ogologo oge gara aga, n'ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ụzọ, Chineke gwara ndị nna nna anyị okwu site n'ọnụ ndị amụma, 2 ma na mb laste ikpe -azu ndia ka Ọ gwaworo ayi okwu site n'aka Ọkpara -Ya, onye ọ họtara onye -nketa nke ihe niile, Onye ọ bụkwa site n'aka ya ka O kere ụwa. 3 Ọ bụ nchapụta nke ebube Chineke na akara zuru oke nke okike ya, na -ejikwa okwu ike ya na -akwado eluigwe na ụwa. Mgbe ọ sachara mmehie, ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị elu nke ịdị elu, 4 ebe ọ dị elu karịa ndị mmụọ ozi dịka aha o ketara dị mma karịa nke ha. 5 N'ihi na ònye n'ime ndị mmụọ ozi ka Chineke sịrị, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị”? Ma ọ bụ ọzọ, “M ga -abụ nna ya, ya onwe ya ga -abụkwara m nwa”?
Ndị Hibru 2: 5-11, Ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na-abịa, nke anyị na-ekwu maka ya
5 n'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya. 6 A na -agba akaebe ebe, "Gịnị bụ mmadụ, na ị na -echeta ya, ma ọ bụ nwa nke mmadụ, na ị na -elekọta ya? 7 I mere ya ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi; I were nsọpuru na nsọpuru kpube ya okpu -eze, 8 na -edobe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. ” Ugbu a, ido onwe ya n'okpuru ihe niile n'okpuru ya, ọ hapụghị ihe ọ bụla n'okpuru ya. Ka ọ dị ugbu a, anyị ahụbeghị ihe niile n'okpuru ya. 9 Ma anyị na -ahụ onye e mere ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi, ya bụ, Jizọs, e kpubere ya otuto na nsọpụrụ n'ihi ahụhụ ọnwụ, ka o site n'amara Chineke detụ ọnwụ ire maka mmadụ niile. 10 N'ihi na o kwesiri ka onye ahu, onye ihe nile di kwa n'aka ya, iweta ọtụtụ ụmụ n'ebube, kwesịrị ime ka onye nzọpụta ha zuo oke site na nhụjuanya. 11 N'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi. Ọ bụ ya mere na ihere anaghị eme ya ịkpọ ha ụmụnna
Ndị Hibru 5: 5-10, Ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na-erubere ya isi
5 Otú a kwa Kraist ewelighi Onwe -ya ibu onye -isi -nchu -àjà, mana onye họpụtara ya sị ya, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla gị"; 6 dika ọ n alsokwu kwa n'ebe ọzọ, si, Gi onwe -gi bu onye -nchu -àjà ebighi -ebi dika usoro Melkizedek si di. 7 N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs ji akwa akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọ arịrịọ, nye onye nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ, a nụkwara ya n’ihi nsọpụrụ ya. 8 Ọ bụ ezie na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara. 9 Ebe emere ya ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 ebe Chineke hoputara ya onye -isi -nchu -àjà dika usoro Melkizedek si di.
Ndị Hibru 9:15, Ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ
15 Ya mere ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndi akpọrọ wee nata ihe nketa ebighi -ebi ekwere na nkwa, ebe ọnwụ nwụrụ nke na -agbapụta ha na njehie ndị e mere n'okpuru ọgbụgba ndụ nke mbụ.
Ndị Hibru 9: 24-28, Kraịst abanyela n'eluigwe n'onwe ya ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị
24 N'ihi na Kraist abatawo, ọ bụghị n'ebe nsọ ndị e ji aka mee, bụ́ ihe atụ nke ezi ihe, kama n'ime eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị. 25 Ọ bụghịkwa iji onwe ya chụọ àjà ugboro ugboro, ebe nnukwu onye nchụàjà na -abata ebe nsọ kwa afọ na ọbara na -abụghị nke ya, 26 n'ihi na mgbe ahụ ọ gaara ata ahụhụ ugboro ugboro kemgbe mmalite nke ụwa. Mana dịka ọ dị ugbu a, ọ pụtara otu ugboro na ngwụcha afọ iwepu nmehie site n'àjà nke onwe ya. 27 Dịkwa ka a kara aka na mmadụ ga -anwụ otu ugboro, emesịa ikpe ga -abịa, 28 otua, ebe Kraist, mgbe achụrụ ya aja ka ọ buru mmehie ọtụtụ mmadụ, ọ ga -apụta nke ugboro abụọ, ọ bụghị ime mmehie, kama ịzọpụta ndị na -eche ya..
Ndị Hibru 10: 19-23, Anyị nwere nnukwu onye nchụàjà na-elekọta ụlọ Chineke
19 Ya mere, ụmụnna m, ebe ọ bụ na anyị nwere obi ike ị banye ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, 20 site n'ụzọ ọhụrụ na nke dị ndụ nke o megheere anyị site na ákwà mgbochi, ya bụ, site n'anụ ahụ ya, 21 na ebe ọ bụ anyị nwere nnukwu onye nchụàjà na -elekọta ụlọ Chineke, 22 ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkwenye siri ike nke okwukwe, were fesa obi anyị dị ọcha pụọ ​​n'akọ na uche ọjọọ wee were mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị. 23 Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike n'amaghị jijiji, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi.
Ndị Hibru 12: 1-2, Ọ tachiri obi n'obe wee nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke
1 Ya mere, ebe anyị nwere oke igwe nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla na mmehie nke jidesiri anya ike, ka anyị werekwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e debere n'ihu anyị, 2 anyị na -elegara Jizọs anya, onye guzobere okwukwe anyị, onye maka ọ joyụ e debere n'ihu o diri obe, na -eleda ihere, na nọ ọdụ n'aka nri nke ocheeze Chineke.
1 Pita 3: 21-22, ebe edobere ndị mmụọ ozi, ndị isi, na ike n'okpuru ya
21 Baptizim, nke kwekọrọ na nke a, na -azọpụta gị ugbu a, ọ bụghị dị ka iwepụ unyi n'ahụ mana kama ịrịọ Chineke maka ezi akọ na uche, site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst, 22 onye gara eluigwe na nọ n'aka nri Chineke, ebe edobere ndị mmụọ ozi, ndị isi, na ike n'okpuru ya.
Mkpughe 1: 5-6, Jizọs ji ọbara ya tọhapụ anyị site na mmehie anyị wee mee anyị ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya
5 na site Jesu Kristi onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa. Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 me -kwa -ra ayi ala -eze, ndi -nchu -àjà nye Chineke na Nna -Ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Edere Abụ Ọma 110: 1 ”n'ọtụtụ ebe na agba ọhụrụ gụnyere Matiu 22:44, Mak 12:36, Luk 20:42, Ọrụ 2:34 na Ndị Hibru 1:13. Nkebi ahịrịokwu a "JEHOVA sịrị Onyenwe m" yiri ka ọ na -akọwa na e nwere ndị nwe abụọ. Agbanyeghị, Abụ Ọma nke 110 metụtara ihe YHWH gwara Mesaịa nke mmadụ.
Abụ Ọma 110: 1-4 (NIV), ka Jehova siri Onye-nwe m
1 Jehova wee sị Onyenwe m: "Nọdụ ala n'aka nri m, Ruo mgbe m ga -eme ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ gị. " 2 Jehova si na Zaịọn zipụ mkpanaka gị dị ike. Na -achị n'etiti ndị iro gị! 3 Ndị gị ga -eji onwe ha nye onwe ha n'ụbọchị ike gị, n'uwe nsọ; site n'akpa nwa ụtụtụ, igirigi nke ntorobịa gị ga -abụ nke gị. 4 Jehova a swornụwo iyi, ọ gaghị agbanwe obi ya, sị, “Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.”
Abụ Ọma 110: 1-4 (LSV), YHWH nye Onyenwe m
Nkwupụta nke YHWH nye Onye -nwem: "Nọdụ ala n'aka nri m, || Ruo mgbe m ga -eme ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ gị. ” YHWH si na Zaịọn zipụ mkpanaka ike gị, || Chịa n'etiti ndị iro gị. Ndị gị [bụ] onyinye afọ ofufo n'ụbọchị ike gị, na nsọpụrụ nke ịdị nsọ, || Site n'afọ, site n'ụtụtụ, || Ị nwere igirigi nke ntorobịa gị. YHWH a hasụwo iyi, ọ naghịkwa echegharị, “Ị bụ] onye nchụàjà ruo mgbe niile, || Dị ka usoro Melkizedek si dị. "
Na Bible Bekee anyị, otu okwu ahụ bụ “onyenwe” na -asụgharị ọtụtụ okwu Hibru dị iche iche. Ogologo oge “mgbakọ ndị ntụgharị” na -eji ngwakọta dị iche iche nke mkpụrụedemede ukwu na obere mkpụrụedemede (“ONYENWE ANYỊ,” “Onyenwe anyị,” na “onyenwe”) iji mara ọdịiche dị n'etiti okwu Hibru mbụ. Mgbe anyị hụrụ ka edere “Onyenwe anyị” na mkpụrụedemede dị elu “L,” anyị ndị na -agụghị asụsụ Hibru na -adabere na mgbakọ siri ike na ọ na -abụkarị ntụgharị “Adonai”. Nsogbu bụ na n'amaokwu a, okwu Hibru mbụ abụghị "adonai" kama ọ bụ "adoni," Na Hibru enwere ọdịiche dị n'okwu ndị a sụgharịrị "ONYENWE ANYỊ" na okwu abụọ a. Young Concordance depụtara okwu Hibru iri na otu nke a sụgharịrị ịbụ “onyenwe”. Anọ nke gbasara anyị ebe a bụ ndị a:
YHWH - (Yahweh ma ọ bụ Jehova) Okwu a bụ “Onyenwe anyị” nke mbụ n'Abụ Ọma 110: 1. Ọ bụ aha Chineke nke ndị Juu weere dị ka ihe dị nsọ nke na a kpọghị ya akpọtụ. Kama, mgbe ha na -agụ Akwụkwọ Nsọ, ha na -edochi okwu a "Adonai". Nkwekọrịta a nabatara bụ na na ntụgharị asụsụ Bekee, ọ na -apụta mgbe niile dị ka ma ọ bụ ONYENWE ANYỊ, ma ọ bụ CHINEKE (nke kachasị elu) si otú a na -enyere anyị aka ịghọta na okwu mbụ bụ “Yahweh.”
ADON - Ejiri okwu a site na mgbochiume Hibru Aleph, Dalet, Nun. Ọ na -apụtakarị n'ụdị a (na -enweghị mgbakwunye ọ bụla). Ewezuga ihe dị ka ugboro iri atọ ebe ọ na -ekwu maka Chukwu dị nsọ, ihe omume ndị ọzọ niile na -ekwu maka ndị nwenụ.
ADONAI - Na ụdị ya, ọ na -ezo aka na Chineke oge niile, na ọ dịghị onye ọzọ. “Mgbakọ ndị ntụgharị” nabatara bụ na n'ụdị a, ọ na -apụta mgbe niile n'asụsụ Bekee dị ka “Onyenwe anyị” (nke nwere nnukwu mkpụrụedemede “L”)
ADONI - Emepụtara nke a site na ịgbakwunye mgbakwunye "i" na "adon". Na mgbakwunye a ọ pụtara "onyenwe m.”(A na -asụgharịkwa ya mgbe ụfọdụ dị ka“ nna ukwu. ”) Ọ pụtara ugboro 195, a na -ejikwa ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nwe mmadụ (mana oge ụfọdụ nke ndị mmụọ ozi). Mgbe a sụgharịrị ya “onyenwe”, ọ na -apụta mgbe niile na obere mkpụrụedemede “l” (ewezuga otu oge ahụ na Abụ Ọma 110: 1) Ndepụta pdf nke ebe 195 mere adoni n'amaokwu 163 dị ebe a: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
okwu Hibru a na -eji maka “Onyenwe anyị” na -ekwu maka Jizọs, “Onyenwe anyị sịrị m Jehova”Bu ADONI. Okwu a na -ezo aka ndị nwenụ mmadụ. Ọ na -ekwu maka mmadụ nke Jizọs - ọ bụghị chi. Na okwu Grik ndị agha a na -eji ya ugboro abụọ. Kyrios, nke a sụgharịrị ịbụ '' onyenwe '' bụ okwu nkịtị nke pụtara nna ukwu, ọ bụghịkwa okwu ejiri naanị Chukwu mee. Anyị maara na enwere ọtụtụ “ndị nwenụ”, mana n'ihe gbasara okwukwe anyị, Jizọs bụ otu Onyenwe anyị nke anyị si enweta nzọpụta. Jizọs bụ ndokwa anyị site na otu Chineke na Nna anyị, onye bụ isi mmalite nke ihe niile na onye anyị bụ maka ya (1 Cor 8: 5-6).
N'amaokwu nke Abụ Ọma 110: 1-4 anyị na-ahụ na Onyenwe anyị (adoni. Nke a bụkwa ihe ngosi dị mkpa. Ndị isi nchụàjà bụ ndị nnọchiteanya nke Chineke bụ ndị a họpụtara site na mmadụ. Ndị Hibru 5 nwere njikọ na Abụ Ọma 110:
Ndị Hibru 5: 1-10 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), onye Kraịst họpụtara bụ onye sịrị ya, “Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi”
1 n'ihi na a na -ahọpụta onye isi nchụàjà ọ bụla n'etiti mmadụ ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie. 2 O nwere ike jiri nwayọọ na -emeso ndị na -amaghị ihe na ndị na -enupụ isi ihe, ebe ọ bụ na ya onwe ya na -enwe adịghị ike. 3 N'ihi nke a, iwu ji ya ịchụ àjà maka mmehie nke ya dịka ọ na -achụ maka ndị mmadụ. 4 Ọ dịghịkwa onye na -ewere nsọpụrụ a nye onwe ya, kama ọ bụ naanị mgbe Chineke kpọrọ ya, dịka akpọrọ Erọn. 5 Otu a kwa Kraịst ebulighị onwe ya elu ịbụ nnukwu onye nchụàjà, kama ọ bụ onye ahụ nke gwara ya họpụtara ya, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị”; 6 dị ka ọ na -ekwukwa n'ebe ọzọ, "Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi, dika usoro Melkizedek si dị. " 7 N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs jiri akwa akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike nye onye nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ, ma a nụrụ ya n’ihi nsọpụrụ ya. 8 N'agbanyeghị na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara. 9 N'ịbụ onye e mere ka ọ zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 ebe Chineke hoputara ya onye -isi -nchu -àjà dika usoro Melkizedek si di.
James Dunn, Kraịst na Mmụọ, Mpịakọta nke 1: Christology, 315-344, p. 337
Maka Paul onye ndị agha utu aha na -arụkarị ọrụ dị ka ụzọ isi amata Kraịst na otu Chineke. Nke a anyị na -ahụ nke ọma n'okwu ahịrịokwu ugboro ugboro “the Chineke na Nna of anyị Jehova Jizọs Kraịst ”(Rom 15: 6; 2 Kọr. 1: 3, 11:31; Efe. 1: 3, 17; Kọl. 1: 3); nakwa na 1 Kọr. 8: 6, ebe a na -ekwupụta Kraịst dị ka otu Onyenwe anyị n'akụkụ ọrụ Shema nke otu Chineke; na ọkachasị na 1 Kọr. 15: 24-28, ebe onwere ịbụ onyenwe nke Kraist na okwu abụọ ahụ. 110: 1 na Ọma. 8: 6 na -ejedebe n'ido onwe ya nke Ọkpara ahụ n'okpuru Chineke Nna, “ka Chineke wee bụrụ ihe niile n'ime ihe niile. ”Ọbụnadị ukwe ndị Filipaị ka a ga -akpọtụ ebe a; n’ihi na n’ikpe m, ọ bụ ngosipụta nke ọmụmụ Kraịst nke Adam, nke mere na Filip. A na -ahụta nke ọma 2:10 dị ka nkwupụta nke ịbụ onyenwe nke Kraist dị ka (nke ikpeazụ) Adam, ebe, ebe Pọl mere ka ọ pụta ìhè, ihe niile e kere eke na -anabata onyenwe Kraịst. “Ka otuto dịrị Chineke Nna” (Phil 2: 11)
1 Ndị Kọrịnt 8: 4-6 chịkọtara nghọta nke otu Chineke na Nna na otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'ụzọ dị nkenke. N'ọdịiche nke "chi" enwere naanị otu Chineke nna anyị bụ onye okike na ihe kpatara anyị ji dịrị. N'ime udi “ndị nwenụ” anyị jidere Jizọs Kraịst (Mezaịa e tere mmanụ) ịbụ otu Onyenwe anyị site n'aka ya zọpụta anyị. Emere ihe niile nke ọma tupu Kristi amata ihe niile edobere ya n'okpuru ụkwụ ya. A ga -eme ka ihe niile ka ga -adị adị dịrị site na Kraịst. Anyị na -ahụ nke ọma na ma Pita ma Pọl lere Chineke anya dị ka “Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”
"... ọ dịghị Chineke ọ bụla ma ọ bụghị otu." 5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma nye anyị, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya.
Nna, onye bụ Chukwu, nọ ebe a dịka ebe ọ bụla ọzọ kwuru na ọ bụ isi mmalite na okike
Pọl na Pita na -ekwu maka Chineke, ọ bụghị naanị dị ka Chineke nke Kraịst kamakwa dịka 'Chineke nke anyị Jehova Jesu Kristi.'
Onye -nwe Mesaịa ahụ ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na Onye -nwe Chineke. Ejiri nlezianya mee ka ndị isi abụọ ahụ mata nke ọma na Abụ Ọma 110: 1. YHWH bụ otu Chineke na onye nwe nke abụọ nke Abụ Ọma 110: 1 bụ mmadụ, adoni, “Onyenwe m,” Mezaịa ahụ. Adoni abụghị aha chi mgbe niile, kama ọ bụ nke na-abụghị chi.
A kpọrọ Jizọs “Onyenwe anyị Mesaịa” ọtụtụ ugboro na agba ọhụrụ. Onyenwe anyị na -ezo aka na Mesaịa nke mmadụ
Ọbụnadị dịka Onyenwe anyị, Jizọs kwetara na Nna ya bụ Chineke ya (Jọn 20:17).
N'ebe a ọ bịara doo anya na kyrious (onyenwe) abụghị otu ụzọ isi mee ka a mata Jizọs na Chineke, mana ọ bụrụ na ihe ọ bụla bụ ụzọ iche Jizọs na Chineke ” - (Dr James Dunn, Theology of Paul Apostle, p.254)
Ihe gbara ya gburugburu bụ igodo ịghọta ihe nkebi ahịrịokwu “ihe niile sitere na ya” pụtara. Enweghi aha n'ime ma ọ bụ na nso nso ma ọ bụ dị anya gbasara okike ụwa nke mere na "ihe niile" na -ezo aka na okike mbụ nke Jenesis. Amaokwu a na -ekwu maka nzọpụta site na Kraịst na ihe nketa anyị nwere n'ime ụwa na -abịa.